Landed house for rent in Myanmar | ShweProperty.com
Landed Houses For Rent in Myanmar
အမှတ်(၆) ၊ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်၊ ၉မိုင် (မရမ်းကုန်းမြို့နယ်) ၊ Yadanar Housing အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ 4ထပ်တိုက်Rcနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…...
အမှတ်(၆) ၊ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်၊ ၉မိုင် (မရမ်းကုန်းမြို့နယ်) ၊ Yadanar Housing အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ 4ထပ်တိုက်Rcနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…
Ko Myo Myint Kyaw
Advertiser : Ko Myo Myint Kyaw
Asking Price : 9,000 USD
Phone no : 09425844794
5 Bedrooms House in Off-Inya Road,Closely located by Golden Valley Area -5Bedrooms (4Master Bedrooms and 1 Single Room) - Large Outdoor Space - Good Natural Light - Very Quiet Neighborhood - Small Garden * Bike Distance to Golden Valley * In between Bahn Township and Kamayut Township * Short Drive…...
5 Bedrooms House in Off-Inya Road,Closely located by Golden Valley Area -5Bedrooms (4Master Bedrooms and 1 Single Room) - Large Outdoor Space - Good Natural Light - Very Quiet Neighborhood - Small Garden * Bike Distance to Golden Valley * In between Bahn Township and Kamayut Township * Short Drive…
Landed House For Rent in Shwepyithar
20000 sqft warehouse area for rent in Shwe Pyi Thar industrial zone. Has 315 KVA transformer. Monthly Rent Price - 5500 USD (Nego) Warehouse Rent in Shwe Pyi Thar (ID-270) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိ…...
20000 sqft warehouse area for rent in Shwe Pyi Thar industrial zone. Has 315 KVA transformer. Monthly Rent Price - 5500 USD (Nego) Warehouse Rent in Shwe Pyi Thar (ID-270) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိ…
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာတွင် အကျယ်အဝန်း(80x60) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၅)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊…...
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာတွင် အကျယ်အဝန်း(80x60) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၅)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊…
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ တောင်မြောက်လမ်းဆုံတွင် အကျယ်အဝန်း(50x80) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၅)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊…...
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ တောင်မြောက်လမ်းဆုံတွင် အကျယ်အဝန်း(50x80) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၅)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊…
မာစတာအိပ်ခန်း(၅)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၁၄လုံး)၊ ဖုန်း၊ ပါကေးခင်းထားသော နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့် 3RC လုံးချင်း အမြန်ငှားမည်။…...
မာစတာအိပ်ခန်း(၅)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(၁၄လုံး)၊ ဖုန်း၊ ပါကေးခင်းထားသော နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့် 3RC လုံးချင်း အမြန်ငှားမည်။…
#Land size(40'x60') #3 Master bedrooms #Living Room #Dining Room #Aircon #Fully funished ...
#Land size(40'x60') #3 Master bedrooms #Living Room #Dining Room #Aircon #Fully funished
Landed houses for Rent in Myanmar Real Estate for Rent Properties for Rent